Tapakilan'ny fiaran-dalamby SBB mora vidy sy ny làlan'ny dia | Save A Train
Tapakilan'ny fiaran-dalamby SBB mora vidy sy ny làlan'ny dia
Home > Tapakilan'ny fiaran-dalamby SBB mora vidy sy ny làlan'ny dia
Eto ianao no afaka mahita ny fampahalalana rehetra momba Tapakilan'ny fiaran-dalamby SBB mora vidy ary SBB vidin'ny dia ary tombony.
Lohahevitra: 1. SBB avy amin'ny Soritr'asan'ny Train
2. Momba ny SBB 3. Topy hevi-baovao hahazoana tapakila fiaran-dalamby SBB mora
4. Ohatrinona ny tapakila SBB 5. Lalana fitsangatsanganana: Fa maninona no tsara kokoa ny mitondra lamasinina SBB, ary tsy mandeha amin'ny fiaramanidina
6. Inona no tsy mampitovy ny faneva, Andro mandalo, ary Supersaver ao amin'ny SBB 7. Misy famandrihana SBB ve
8. Mandra-pahoviana alohan'ny fiaingan'ny SBB no tonga 9. Inona ny fandaharam-potoanan'ny fiaran-dalamby SBB
10. Gara aiza no iasan'ny SBB 11. SBB FAQ
SBB avy amin'ny Soritr'asan'ny Train
The Lalam-by Federalin'i Soisa, SBB, no orinasa nasionalin'ny lalamby izay miasa any Suisse.
Ny lamasinina SBB dia laharana eo an-tampon'ny rafitry ny lalamby any Eropa, ary ao 2017 laharana voalohany amin'ny kalitaon'ny serivisy, filaharan'ny fiarovana, sy ny index index.
25 mpandeha an-tapitrisany mandeha amin'ny SBB isan'andro.
Ny serivisy fiaran-dalamby SBB dia iray amin'ireo serivisy fiaran-dalamby ara-potoana indrindra eto amin'izao tontolo izao, miaraka amin'ny latsaky ny 3 tara ’minitra amin'ny salanisa.
Ny tionelina lava indrindra an'ny SBB, ny tionelina Gotthard Base, ao amin'ny Nanketo Alpes eto Soisa, fepetra 57.1 kilometatra ary mametraka rakitsoratra manerantany.
SBB dia manana 3 fiteny ofisialy: alemaina, frantsay, ary Italiana. Ary noho izany, Ny gara gara SBB dia voatonona ary voamarika mifanaraka amin'ny toerana misy azy: ny anaran'ny gara sy ny famantarana any amin'ny tanàna roa dia amin'ny fiteny roa ao an-toerana, ary ny antony ahitanao ilay anarana indraindray toa izao SBB CFF FFS.
Momba ny SBB
SBB dia serivisy fiaran-dalamby Soisa izay iray amin'ny tsara indrindra eran'izao tontolo izao.
Ny orinasam-by nasionalin'ny SBB Soisa miasa manerana an'i Suisse rehetra, amin'ny 798 gara, ary 721 tapakila amidy tapakila fiaran-dalamby. Ny orinasan-dalamby SBB dia an'ny fanjakana nanomboka tamin'ny 1 Janoary, 1999, midika hoe mihazona ny fanjakana federaly 100% ny anjara.
Mandeha Tehirizo ny tranokala fiaran-dalamby na ampiasao ity widget ity hikarohana azy manofana tapakila ho an'ny SBB
Topy hevi-baovao hahazoana tapakila fiaran-dalamby SBB mora
Number 1: Raiso mialoha ny tapakilan'ny SBB arak'izay azonao atao
Tapakila fiaran-dalamby SBB misy amin'ny Internet hatramin'ny 60 andro mialoha ny datin'ny dia ataonao. Rehefa manafatra tapakilan'ny lamasinina mialoha ianao, mahazo ny tapakila mora indrindra ianao ary ny tapakilan'ny fiaran-dalamby SBB mora indrindra dia tena voafetra. koa, Nisondrotra ny vidin'ny tapakilan'ny fiaran-dalamby SBB satria nanakaiky ny andro fitsangatsanganana, ka mba mitahiry vola amin'ny fividianana tapakila fiaran-dalamby SBB, alao mialoha ny tapakilan'ny lamasininao. Mitahiry vola amin'ny tapakilan'ny fiaran-dalamby SBB, amidy vao tapakilao.
Number 2: Fitsangatsanganana ataon'ny SBB mandritra ny fotoana tsy an-tampon'ny tampony
Tapakila fiaran-dalamby SBB dia mora kokoa amin'ny vanim-potoana avo indrindra, amin'ny fiandohan'ny herinandro, ary mandritra ny andro. Afaka mahazo antoka ianao fa mahazo fiaran-dalamby mora kokoa tapakila ao anatin'ny herinandro. Amin'ny talata, Alarobia, sy Alakamisy, Ny tapakilan'ny fiaran-dalamby SBB no be toekarena indrindra. Noho ny habetsaky ny raharaham-barotra mpandeha mandeha miasa maraina sy hariva, Ny tapakilan'ny lamasinina dia mety ho lafo be. Noho izany, mora vidy lavitra kokoa ny mandeha isaky ny antoandro sy hariva. Ny faran'ny herinandro dia fotoam-pitsarana hafa ho an'ny fiaran-dalamby, indrindra ny zoma sy ny asabotsy. Niakatra ihany koa ny vidin'ny tapakilan'ny lamasinina SBB amin'ny ny fialantsasatra ary fetin'ny sekoly.
Number 3: Omeo baiko ny tapakilan'ny SBB rehefa azonao antoka ny fandaharam-potoanananao
Fiaran-dalamby SBB tena mitaky mafy, ary miaraka amin'ny irery 2 orinasan-dalamby hafa toy ny fifaninanana, izy ireo amin'izao fotoana izao no mijanona ho safidy ambony indrindra ho an'ny lamasinina any Suisse. Azon'izy ireo atao ny mametraka ny fetra fidina amin'ny fiaran-dalamby toy ny ananan'izy ireo izay mandrara ny fifanakalozana tapakila na famerenam-bola raha tsy izany no karazan'orinasa mpandraharaha. Na dia misy aza ny tranonkala ahafahanao mivarotra ny tapakilan'ny tanana amin'ny tanana faharoa, Tsy avelan'ny SBB hivarotra tapakila faharoa. Ahoana no fomba hanampianao vola hitehirizana vola? Alao fotsiny ny tapakilan'ny tapakila raha azonao antoka fa hamonjy anao amin'ny famandrihana tapakila iray indroa ny tapakilanonao satria misy zavatra tonga ary tsy afaka mampiasa tapakila tany am-boalohany ianao.
Number 4: Vidio ny tapakilan'ny SBB amin'ny Save A Train
Save a Train dia manana ny lehibe indrindra, ny tsara indrindra, sy ny tapakila mora indrindra ho an'ny tapakilan'ny lamasinina any Eropa. Ny fifandraisantsika amin'ireo mpandraharaha gara maro, loharanom-baovao momba ny tapakilan'ny lamasinina, ary ny fahalalantsika ny algorithm teknolojia dia manome anay miditra amin'ny fifanarahana tapakila tapakila mora indrindra. Tsy manolotra tolotra tapakilan'ny lamasinina mora ho an'ny SBB fotsiny izahay; manome toy izany koa izahay ho an'ireo hafa solon'ny SBB.
Ny vidin'ny Lyon mankany Basel
Paris ka hatrany Basel Train vidiny
Ny vidin'ny fiaran-dalamby any Lucerne
Ohatrinona ny tapakila SBB?
Ny tapakila SBB dia manomboka amin'ny € 12,50 ka hatramin'ny 125 € ho an'ny dia lamasinina tokana. The vidin'ny tapakila fiaran-dalamby SBB miankina amin'ny karazana tapakila, toerana halehany, ary rehefa misafidy ny handeha ianao:
Kilasy voalohany € 50 – € 95 € 50 – € 125
Lalana fitsangatsanganana: Fa maninona no tsara kokoa ny mitondra lamasinina SBB, ary tsy mandeha amin'ny fiaramanidina
1) Tonga any amin'ny City Center. Tombony iray amin'ny fiaran-dalamby SBB raha ampitahaina amin'ny fiaramanidina. Fiaran-dalamby SBB sy ny rehetra fitsangatsanganana lamasinina hafa manomboka amin'ny toerana rehetra ao an-tanàna ka hatrany afovoan'ny tanàna manaraka, doesn’t matter if it is a tahiry voajanahary na vohitra. Izy io dia mamonjy fotoana sy ny vidin'ny taksiam-piaramanidina avy any amin'ny seranam-piaramanidina mankany afovoan-tanàna. Mijanona ny fiaran-dalamby, moramora kokoa ny mankany amin'ny toerana mankamin'ny tanàna alehanao. Tsy maninona na aiza na aiza ianao, Geneva, Basel, Zermatt, na Zurich, tombony lehibe amin'ny fiaran-dalamby SBB ny fijanonana afovoan-tanàna!
2) Ny dia amin'ny alàlan'ny fiaramanidina dia mitaky anao ho eny amin'ny seranam-piaramanidina, fara fahakeliny, ora maromaro alohan'ny ora sidinao. Tokony handalo fanamarinana fiarovana ianao alohan'ny avela hiditra amin'ny fiaramanidina. Miaraka amin'ny lamasinina SBB, mila eo amin'ny gara fotsiny ianao dia adiny iray mialoha ary indraindray kely aza. Rehefa dinihinao koa ny fotoana ilana anao hidirana eny amin'ny seranam-piaramanidina mankany afovoan-tanàna, ho tsapanao fa ny fiaran-dalamby SBB dia tsara kokoa amin'ny resaka total Travel fotoana.
3) Eo amin'ny lafiny rehetra, ny vidin'ny tapakilan'ny fiaran-dalamby SBB dia toa lafo kokoa noho ny tapakilan-drivotra. Na izany aza, rehefa mampitaha ny fiampangana rehetra voarohirohy, Ny tapakilan'ny fiaran-dalamby SBB dia manana fifanarahana vidiny tsara kokoa. Miaraka amin'ny vidin-javatra hafa toy ny saram-bidy izay tsy andoavanao vola amin'ny lamasinina, mandeha amin'ny SBB no tsara indrindra.
4) Sariaka tontolo iainana. Raha oharina amin'ny fiaran-dalamby sy fiaramanidina, fiarandalamby dia hivoaka eo amboniny foana. Ny fiaramanidina dia mandoto ny tany amin'ny karbaona avo lenta sy ny co2 avoakany. Fiaran-dalamby amin'ny fampiasana fampitahana mainka tsy ny dian-tongotr'i Carbon fa ny fiaramanidina.
Ny vidin'ny fiaran-dalamby amin'i Chur mankany amin'ny kaaotra
Ny vidin'ny Zurich mankany Chur Train
Vidiny Geneva mankany Chur Train
Inona no tsy mampitovy ny faneva, Andro mandalo, Saver Day Pass, ary Supersaver ao amin'ny SBB?
SBB dia manana karazan-tapakila samihafa amin'ny teti-bola sy karazana mpandeha samihafa: na fandraharahana na fialam-boly. Azonao atao antoka fa mifanaraka amin'ny iray amin'ireo tapakila ireo izany.
Tapakilan'ny SBB mahazatra:
The Tapakilan'ny SBB Standard no mora miovaova indrindra amin'ny tapakila SBB rehetra. Ity tapakilan'ny lamasinina ity dia natao ho an'ny teboka 1 lalana na lalan-by. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, ny tapakila mahazatra SBB dia ny carte de voyage mahazatra. tena zava-dehibe, ity tapakilan'ny lamasinina ity dia manan-kery mandritra ny tontolo andro nofidinao tamin'ny fotoana nividiananao, ary mandra-pahatongan'ny 5 ny ampitso. Ankoatry ny, azonao atao ny mividy tapakila point-to-point SBB ho an'ny kilasy 1 sy 2. Tombony lehibe iray hafa an'io tapakila manondro isa io ny ankizy hatramin'ny taona 6 mandeha malalaka. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, afaka mivezivezy amin'ny toerana tianao ianao sy amin'ny kilasy rehetra, amin'ny dianao avy any A mankany B.
SBB Day Pass ary ny Saver Day Pass Tickets:
Miaraka amin'ny karatra fitsangatsanganana Saver Day Pass, afaka mandoa vola € 27 isaky ny dia ianao. Ny tapakila Day Pass dia tsy misy raha tsy azonao mialoha izany, tsy misy ao amin'ny gara izy ireo, tany am-boalohany 60 andro mialoha ny datin'ny fiainganao. Azonao atao ihany koa ny manafidy an'ity karazana tapakilan'ny lamasinina iray andro alohan'ny dia ity. Ary, ny tapakila Saver Day Pass dia manan-kery ho an'ny sambo, fiara fitateram-bahoaka, na dia lavitra.
Ity kilasy tapakila ity dia tsy malefaka toy ny tapakilan'ny fiaran-dalamby Standard SBB, fa mora kokoa noho ny tapakila fiaran-dalamby hafa. Ny tapakilan'ny Supersaver SBB dia manolotra hatramin'ny 70% fihenam-bidy amin'ny tapakila mahazatra. Mifanohitra amin'ny tapakilan'ny fiaran-dalamby mahazatra, ity karazana tapakila ity dia manome ny saran-dàlana ambany indrindra amin'ny dia manokana avy any A mankany B. Meaning, tsy afaka mivezivezy na mivoaka amin'ny gara ianao, afa-tsy ao amin'ireo gara efa nosoratanao mialoha.
Ny karatra fitsangatsanganana Day Pass dia manome anao fahalalahana amin'ny datin'ny dia. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, afaka mandeha ianao isaky ny maniry izany, amin'ny andro fiaingana.
Misy famandrihana SBB ve?
Ny olom-pirenena eo an-toerana ihany no afaka mividy ny karatra fizahan-tany GA, izay karatra iray amin'ny ankapobeny. Ny karatra fitsangatsanganana GA dia manan-kery amin'ny fitateram-bahoaka rehetra any Suisse.
Azonao atao ny mividy azy amin'ny:
– Kaontera tapakila SBB.
– Amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa SBB eo an-toerana 848 44 66 88
– Avy amin'ireo mpiasa amin'ny fiaran-dalamby sy busBBB.
Ny ankizy sy ny olon-dehibe mandra-pahatongan'ny taona 16 ary ny ray aman-drenin'izy ireo dia afaka mankafy ny fihenam-bidy amin'ny karatra Familia GA. Azo alaina ity karatra ity raha misy iray amin'ny fianakaviana farafaharatsiny manana ity carte de voy SBB ity.
Ny tompon'ny Familia GA rehetra dia mankafy ny fihenan'ny vidin-tsolika GA hafa. Ankoatry ny, ny fianakaviana iray dia afaka manapa-kevitra raha te hividy ny Familia GA ho an'ny kilasy 1 na 2.
Rehefa ianao 25 resaka fahafinaretana daholo izany, ary ankehitriny manana karatra fito25, afaka mandeha tsy voafetra ianao avy ao 7 PM. Meaning, Ity karatra fitsangatsanganana ity dia mety eo anelanelany 7 pm io 5 aho. Noho izany, manao ahoana ny asany? Ny fito25 dia napetraka ao amin'ny karatra fitsangatsanganana Swiss Pass ary azonao ampiasaina izany amin'ny fijanonana rehetra.
Mandra-pahoviana alohan'ny fiaingan'ny SBB no tonga?
Mba hahazoana ny SBB anao ary ho ara-potoana, ny gara dia manome soso-kevitra fa tonga farafaharatsiny 1 adiny iray mialoha ny hiaingan'ny fiaran-dalamby SBB-nao. Izahay ao amin'ny Save A Train hatramin'ny nandehananay nandeha tamin'ny lamasinina SBB, fahazoan-dàlana tonga ara-potoana 30 minitra mialoha, noho izany dia tsy mila maika ny hamaky ireo gara lehibe ianao hisamborana ny lamasinina. Ankoatry ny, ora iray dia ampy ny fotoana ahafahanao mankafy ireo fivarotana sy toerana fisakafoanana ary hahazoana ireo entana ilainao ilain'ny Ny fitsangatsanganana lamasinina mba ho malefaka araka izay azo atao.
Inona ny fandaharam-potoanan'ny fiaran-dalamby SBB?
Azonao atao ny mahita amin'ny fotoana tena izy ao amin'ny pejy fandraisana amin'ny Save A Train. Ampidiro fotsiny amin'ny toerana misy anao sy ny toerana tianao haleha, ary hasehonay anao ny vaovao havaozina ho an'ny fandaharam-potoana amin'ny lamasinina.
Gara aiza no iasan'ny SBB?
Misy ny farany 10 gara niasa tamin'ny serivisy fiaran-dalamby SBB.
Ny gara Zurich an'ny SBB dia Zurich Central Station (Ny anarana eo an-toerana dia Zurich HB). Ity no gara gara SBB lehibe indrindra any Zurich ary eo afovoan'i Zurich no misy azy, akaiky Renirano Limmat.
Bern no renivohitra Suisse ary gara akaiky indrindra mankany amin'ny Oniversiten'i Bern ao amin'ny Langgasse Quarter.
Any Genève ankehitriny Fiaran-dalamby SBB miainga ary tonga ao amin'ny Station Genève Central, eo afovoan-tanàna.
Basel Ny gara SBB no tobin'ny sisintany lehibe indrindra any Eropa. Izany dia milaza fa Avy any Suisse, afaka mandeha any Alemana ianao, Frantsa, Aotrisy, ary Netherlands miaraka amin'ny serivisy fiaran-dalamby SBB. tena zava-dehibe, misy 50 magazay sy trano fisakafoanana ao amin'ny gara Basel, izay ahafahanao miantsena amin'ny zavatra rehetra ilainao amin'ny dia. Ohatra, afaka mividy tsakitsaky sy fahatsiarovana minitra farany ianao. Avy amin'ny gara Basel SBB, ary ny tobin-tseranana lehibe azonao andehanana dia Frankfurt, Paris, ary Salzburg.
Afa-kevitry ny basikety ve ny bisikileta? Lamasinina SBB?
Avela handeha bisikileta amin'ny lamasinina SBB. Azonao atao ny mividy tapakila ho azy ireo ao amin'ny gara, ary soraty ho toy ny valizy ilay bisikileta na ento any amin'ny fiaran-dalamby toy ny valizy am-pelatanana.
Mivezivezy maimaimpoana amin'ny lamasinina SBB ve ny ankizy?
Eny amin'ny tranga sasany, miaraka amin'ny ankizy latsaky ny enin-taona mandehandeha maimaimpoana. Ankoatry ny, zaza enin-taona, ary miankina amin'ny azy ireo 16 fitsangatsanganana fitsingerenan'ny andro nahaterahana ho an'ny antsasaky ny vidiny.
Omena alalana amin'ny fiaran-dalamby SBB?
Eny, avela ny alika raha mbola mandeha anaty boaty mpandeha na fiara fitaterana entana izy ireo.
Inona avy ireo fomba fiasa amin'ny SBB?
Tokony ho tonga amin'ny gara ianao farafaharatsiny 1 adiny iray mialoha ny ora fiaingan'ny fiaran-dalambinao, ary asehoy ny karapanondro amin'ny mpanara-maso ny tapakila hanamarinana.
FAQ SBB be fangatahana indrindra – Azoko atao ve ny mametraka seza mialoha amin'ny SBB?
ianao afaka tahirin'ny lamasinina ny fantatroamin'ny mialoha hatramin'ny 5 mpandeha amin'ny vidin'ny € 5 isaky ny seza. Na izany aza, ny famandrihana dia tsy maintsy atao amin'ny anaran'ny olona mandeha.
Misy serivisy Wi-Fi ao anatin'ny SBB?
Eny. Azonao atao ny mifaly Free Wifi serivisy amin'ny lamasinina SBB rehetra ary ny kilasy fitsangatsanganana rehetra hatramin'ny 60 minitra.
Raha efa namaky hatreto ianao, fantatrao izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny fiarandalamby SBB ary vonona ny hividy ny tapakilan'ny fiarandalamby SBB anao ianao Save A Train.
Te hampidirina amn'ny tranokalanao ity pejy ity? kitiho eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-sbb%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code), Na azonao atao rohy mivantana ao amin'ity pejy ity.